Tononkiran’i Solomona 1 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Genesisy Eksodosy Levitikosy Nomery Deoteronomia Josoa Mpitsara Rota 1 Samoela 2 Samoela 1 Mpanjaka 2 Mpanjaka 1 Tantara 2 Tantara Ezra Nehemia Estera Joba Salamo Ohabolana Mpitoriteny Tononkiran’i Solomona Isaia Jeremia Fitomaniana Ezekiela Daniela Hosea Joela Amosa Obadia Jona Mika Nahoma Habakoka Zefania Hagay Zakaria Malakia Matio Marka Lioka Jaona Asan’ny Apostoly Romanina 1 Korintianina 2 Korintianina Galatianina Efesianina Filipianina Kolosianina 1 Tesalonianina 2 Tesalonianina 1 Timoty 2 Timoty Titosy Filemona Hebreo Jakoba 1 Petera 2 Petera 1 Jaona 2 Jaona 3 Jaona Joda Apokalypsy 1 2 3 4 5 6 7 8
Tononkiran’i Solomona 1:1-17
1 Ny tononkira+ tsara indrindra nataon’i Solomona.+ 2 “Hanoroka ahy amin’ny molony anie izy.+ Fa tsara noho ny divay ny fanehoam-pitiavanao.+ 3 Manitra mamerovero ny menakao.+ Sahala amin’ny menaka araraka ny anaranao,+ koa izany no itiavan’ny ankizivavy anao. 4 Ento aho hanaraka anao,+ ary andao isika hihazakazaka. Fa nentin’ny mpanjaka ho ao amin’ny efitranony anatiny+ aho! Andao isika hiara-mifaly sy hiravoravo. Andao isika hiresaka momba ny fanehoam-pitiavanao, izay mahafinaritra kokoa noho ny divay.+ Rariny raha tian’ny ankizivavy ianao.+ 5 “Ankizivavy mainty aho, nefa tsara tarehy, ry zanakavavin’i Jerosalema+ ô, tahaka ny tranolain’i Kedara,+ nefa koa tahaka an’ireo lamba+ nanaovana ny tranolain’i Solomona. 6 Aza mijery ahy fa mivalomainty aho, satria main’ny hainandro. Tezitra tamiko ireo zanakalahin’i Neny, ka nasainy niambina tanimboaloboka aho, nefa ny tanimboaloboko+ aza tsy mba nambenako. 7 “Mba lazao ahy, ry olon-tiako,+ izay toerana iandrasanao ondry,+ sy izay ampandrianao ny andian’ondry amin’ny mitataovovonana. Fa nahoana aho no ho toy ny vehivavy mitafy lamba fisaonana eo amin’ireo andiam-bibin’ny namanao?” 8 “Raha tsy fantatrao, ry ilay tsara tarehy indrindra amin’ny vehivavy+ ô, dia mivoaha hanaraka ny dian’ondry ka andraso eo akaikin’ny tranolain’ny mpiandry ondry ny zanak’osinao.” 9 “Amiko ianao, ry tovovavy malalako,+ dia kanto sahala amin’ny soavalivaviko izay mitarika ny kalesin’i Farao.+ 10 Mahafatifaty ny takolakao amin’izato volonao mirandrana. Ary manendrika ny vozonao ny vakana eny aminao.+ 11 Hanamboaranay firavaka volamena boribory+ misy haingony volafotsy ianao.” 12 “Raha mbola eo an-databany boribory ny mpanjaka, dia efa mamoaka hanitra mamerovero+ ny narda+ atỳ amiko. 13 Amiko, ny malalako dia toy ny miora+ eran’ny kitapo kely. Eo anelanelan’ny nonoko+ no hatoriany mandritra ny alina. 14 Sahala amin’ny vonin’ny moina+ eo amin’ny tanimboalobok’i En-jedy+ no fahitako ny malalako.” 15 “Tsara tarehy ianao, ry tovovavy malalako.+ Tsara tarehy ianao. Toy ny masom-boromailala ny masonao.”+ 16 “Tsara tarehy ianao,+ ry malalako, sady mahafinaritra. Ravinkazo malefaka no farafarantsika.+ 17 Sedera+ ny tsivalan-kazo amin’ny tranontsika tsara tarehy, ary hazo zenevrie no mitondra ny tafontsika.
Tononkiran’i Solomona 1